आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
१नेकपा र सरकारबीच हस्ताक्षर समारोह शुरु
२राष्ट्रियसभाबाट सार्वजनिक हुनुअघि विप्लव प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार जाने
३नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा हुने क्रम सुरु, पहिलो चरणमा छुटे धर्मेन्द्र बाँस्तोला
४अमेरिकाको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई
५ओलीसँग एकै मञ्चमा देखिनुअघि नवलपुरमा यसरी झुल्किए विप्लव
६प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले आज संयुक्त सम्बोधन गर्दै
७इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा पुनः बढ्यो
८तीन सातापछि सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
९काठमाडौँ आइपुग्दै विप्लव, बाँस्तोलालगायतका नेताहरु रिहा हुँदै, सुदर्शनलाई छाड्न पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
१०कन्चनपुरमा प्रहरीले कसमाथि चालायो गो’ली ? १ जनाको मृत्यु
११भोलि शुक्रबार पहिलो चरणमा छुट्दैछन् धर्मेन्द्र बाँस्तोला र बिरजंग
१२विप्लव नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयको सर्कुलर
आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । हिजो प्रतितोला ८९ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एक हजार रुपैयाँले ओरालो लागेर ८८ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
तेजावी सुनको मुल्य आज ८७ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि तोलामा ३० रुपैंयाले घटेर प्रतितोला १३ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । हिजो चाँदी प्रतितोला १ हजार ३३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै सेयर बजार नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ । बिहीबार सेयर कारोबार मापक अधिकांश कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्दा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको हो । बिहीबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २५ दशमलव २३ अंकले उकालो लागेर २ हजार ६ सय ३६ दशमलव ६८ अंकमा पुगेको छ ।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कारोबार रकम ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक लगायतका सबइन्डेक्सहरु बढेर हरियाली देखिँदा बीमा र लघुवित्तहरुको सबइन्डेक्स घटेर राताम्मे देखिए ।
बिहीवार बैंकिङ समूहको शेयर २३ अंकले, व्यापार समूहको ७३ अंकले, होटलको साढे चार अंकले, विकास बैंकको ६२ अंकले, जलविद्युतको १८ अंकले, फाइनान्स समूहको पाँच अंकले, उत्पादन समूहको २० अंकले र अन्य समूहको झण्डै ५४ अंकले बढेको छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयर भने घटेको छ ।
बिहीवार दुई सय ६ कम्पनीका एक करोड ९६ लाख ४६ हजार कित्ता शेयर आठ अर्ब ७६ करोड २१ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएका छन् । सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसियाको ५६ करोड र निफ्रा बैंकको ५० करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
बिहीवार नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका शेयरधनीले १० प्रतिशत र अन्य सात वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशतभन्दा धेरैका दरले कमाएका छन् । समग्र बजार बढे पनि मिर्मिरे लघुवित्तका लगानीकर्ताले झण्डै पाँच प्रतिशत गुमाएका छन् ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई
ओलीसँग एकै मञ्चमा देखिनुअघि नवलपुरमा यसरी झुल्किए विप्लव
काठमाडौँ आइपुग्दै विप्लव, बाँस्तोलालगायतका नेताहरु रिहा हुँदै, सुदर्शनलाई छाड्न पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
विप्लव नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयको सर्कुलर